AmaGreenhouse Reducers Iqela elinamandla onke
I-DWJC Reducers (i-gearbox)
Iimpawu zeDWJC Series
Ukunciphisa iGreenhouse (ibhokisi yegiya) isebenzisa izixhobo zokuhambisa izixhobo kunye nokuhambisa izixhobo zentshulube uyilo ngobuciko eliphezulu. Iintshulube kunye nezixhobo ezinama-helical zihamba kakuhle emva kokuguba kokuqhubekeka kwezixhobo, ingxolo ephantsi, imveliso ephezulu ye-torque kunye nokusebenza okuphezulu kokuhambisa.
Sebenzisa i-aluminium die-casting processing, inkangeleko entle, ubunzima bokukhanya, ukusasaza okuhle kobushushu kunye nezinye izibonelelo.
Ukusetyenziswa konyusa ezantsi kunye nokubeka ecaleni kwenza kube lula ukuyifaka kunye nokunciphisa amandla emisebenzi efakiweyo.
Ulawulo lwemveliso yamkela uyilo lwesixhobo esinciphisa intwasahlobo, uhlengahlengiso olululo lomda, kunye nokuchaneka okuphezulu kokuma. Ukuhamba kweemoto zolawulo kunokulungiswa ngokungenasizathu phakathi kwe-1 ne-75 rpm. Kwaye ukusikwa kabini ukuqinisekisa ukusebenza okukhuselekileyo.
I-DWJC Reducers (i-gearbox) Iindawo ezisebenzayo: Indlela yokuvula i-greenhouse yezolimo, indlela yokuvula ikhethini, ukuvula kunye nokuvala isixhobo samandla kwenkqubo yokungenisa umoya yezilwanyana, kunye nezihlandlo ezahlukeneyo apho umlinganiso wesantya unokulawulwa kwaye uluhlu lokuhamba lunokulawulwa.
Ukunciphisa i-greenhouse (i-gearbox) -ye-Egypt
Ukunciphisa iiGreenhouse Reducers (ibhokisi yemiyalezo) Ukubonisa iinombolo zemodeli
Ukunciphisa iiGreenhouse Reducers (i-gearbox) yoKhetho lweModeli, i-Kw & Ratio
Ukunciphisa i-Greenhouse (i-gearbox) Imizobo yokuDayilwa kweMveliso
Ukunciphisa iiGreenhouse (i-gearbox) UkuSebenza kunye neGrafu yeTorque
Ukunciphisa iiGreenhouse (gearbox) Uhlobo lwemiyalelo ebekiweyo
1. Qinisa izikhonkwane ezibini ezinamacala amathandathu kwisangqa sangaphandle senut. Xa ujikeleza iscrew, nut ihamba kwisikrufu. Xa usiya kwindawo yokuphela, i-nut iya kujikeleza kunye ne-screw. Isikere esinexesha elide kwi-nut senza isilwanyana entwasahlobo ukuvula iswitshi kuqala. Umatshini we-FSQ1 (okanye ZSQ1) uyayeka.
2. Ukuba i-FSQ1 okanye i-ZSQ1 iyasilela, umatshini uya kuqhubeka ujikeleza. Izikere ezinde ziya kuqhubeka nokutshintsha imithombo ukuze ivule i-FSQ2 (okanye iZSQ2) kwaye imise umatshini. I-FSQ2 kunye ne-ZSQ2 badlala indima yomshuwalense emibini.
3. Khulula izikhonkwane ezibini ze-hex ukuze uhlengahlengise indawo ehambelana nenathi kwisikrufu ukulawula indawo yokuma.
Abanciphisi beGreenhouse (gearbox) Ukusetyenziswa kwendawo
Ukunciphisa iGreenhouse (i-gearbox) i-FAQ kunye nesisombululo
Ukungasebenzi kakuhle okuqhelekileyo
Ukufakwa kweGreenhouse Reducers (gearbox) Emva kwayo, kokubini okuhle nokubi Akukwazeki ukuqala
1. Jonga ukuba unikezelo lwamandla kunye nomgca wolawulo ufakwe ngokuchanekileyo ngokomzobo we-wiring. Emva koko uyiqale kwakhona.
2. Khangela ukuba isigaba somgca wokulawula sichanekile. Le ndlela yile: jonga i-knurled nut kwicala lokuhamba, sebenzisa izixhobo ukucofa ngononophelo iswitshi esezantsi kuseto lwangaphambili lokutshintsha kwicala lokuhamba kwenut. Ukuba inokuma, isigaba sichanekile. Ukuba awukwazi ukuyeka, kwaye ucinezele iqela lotshintsho olusezantsi ngakwicala lokuhambisa linokwenza umatshini umise, isigaba eso siyabuyela umva, kwaye kuya kufuneka utshintshise isigaba kwaye uzame kwakhona.
3, jonga isixhobo esilinganiselweyo ukuze ubone ukuba ngaba kukho iseti yokutshintsha phezulu kunye nokuhla kokubini kokutshintsha Kwimeko yokudakumba, ukuba kunjalo, yikhulule nut edibeneyo ukuseta kwakhona iswitshi kwaye uyiqale kwakhona.
Emva kokuba isinciphisi sifikelele esiphelweni, ukuqala kwakhona akunakusebenza ngokuchanekileyo okanye ngokungalunganga.
1, ukusilela kufuneka kwenzeke ukuvula isiciko sebhokisi yokutshintsha, ungafumana iqela Zombini iiswitshi ezingaphezulu nezisezantsi zokucofa zicinezelwe phantsi, zikhulule izikrufu ezisetiweyo, setha kwakhona iswitshi, qala kabusha, kwaye uqaphele ukuba utshintsho luqhelekile .
2. Ukuba kukho imeko apho iswitshi icinezelekile, umfowunelwa ohambelanayo kufuneka akhangelwe ukuba ngaba isixhobo sikhululwe ngexesha, ukuba asinakukhutshwa kwangexesha, cinga ukubuyisela isinxibelelanisi.
3. Xa olu hlobo lokungaphumeleli lwenzeka, kuphephe ukucofa isinxibelelanisi kunye nokunyanzelisa ukuqala umatshini. Oku kuya kubangela ukonakaliswa komda, oya kuthi ngokungathandabuzekiyo onakalise ubume bendlu eluhlaza okanye wenze umonakalo kwizixhobo zokunciphisa ngexesha lokusebenza.
umkhuseli wobushushu uvule
Isikhuseli se-thermal siqala, sibonisa ukuba imoto ilayishwe ngaphezulu. Kuyimfuneko ukuba kutshekishwe ukuba ngaba isakhiwo ngasinye sokuqhuba sinesiphene na. Akunakwenzeka ukuba ukonyuse ngokungaboniyo ukhuseleko lwangoku ukuphepha ukonakalisa imoto.
Ukulungiswa kwakhona komda.
2 Phinda uqhagamshele, hlengisa umda
3. Ukuhlolwa kunye nokugcinwa, ukutshintshwa
1.Yongeza ioyile ye-lube
Isantya sokunciphisa kunye neebhokisi zegiya
Inombolo yomnxeba: 0086-571-88220653 / 88220971/88220973 ifeksi: 0086-571-88220651 / 88220972 WhatsApp / Wechat / Viber / Line / Kakao Talk / Telegram: + 86-13083988828 nceda unxibelelane nathi nge-imeyile: [imeyile ikhuselwe]
Ilungelo lokushicilela © 2002-2018.Ever-Power.biz. Onke Amalungelo Agciniwe